အနောက်ဗာဂျီးနီးယား WIC အစားအစာလမ်းညွှန် English | JPMA, Inc
ထိရောက်သောအောက်တိုဘာလ 1, 2018
Legumi & ငါး
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆိုတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းပေါင်းစပ်လျှင်သစ်သီးဖျော်ရည်များ (ဥပမာ - ပန်းသီး - သစ်တော်သီး၊ ပန်းသီး - သရက်သီးကီဝီ) ထည့်နိုင်သည်။
မည်သည့်အဆင့် (ဥပမာ၊ အဆင့် ၁၊ အဆင့် ၂၊ လူနေမှုပုံစံစသဖြင့်)
2 အောင်စသို့မဟုတ်4အောင်စကွန်တိန်နာ၌တည်၏ သာ
တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခု pack ကို - အိုးသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာ
သီးနှံနှင့်အတူအရောအနှော; မွေးကင်းစကလေးအစားအစာညစာစားပွဲ, puddings, အချိုပွဲ (ဥပမာ, မက်မွန် cobbler) သို့မဟုတ် "မွေ့လျော်;" DHA သို့မဟုတ် ARA နှင့်မျိုးကွဲများ၊ သကြား၊ ကစီဓါတ်၊ ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ်ဆိုဒီယမ်ပါသောမွေးကင်းစကလေးငယ်သစ်သီးများ၊ ဒိန်ချဉ်နှင့်အတူကလေးငယ်သစ်သီးများ; သကြား
လတ်ဆတ်သောအသီးများ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ Beech Nut ရဲ့ဒိန်ချဉ်ကိုကြီးထွားစေ၊ Heinz ကလေးငယ်အစားအစာများ
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆိုတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ပဲနှင့်မုန်လာဥ)
၂ အောင်စသို့မဟုတ် ၄ အောင်စကွန်တိန်နာ သာ
တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ခု pack ကို; အိုးသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာ
မွေးကင်းစကလေးအစားအစာညစာစားပွဲ; သကြားဓာတ်၊ ကစီဓါတ်သို့မဟုတ်ဆိုဒီယမ်ပါဝင်သောမွေးကင်းစကလေးငယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ DHA သို့မဟုတ် ARA ပါ ၀ င်သည့်မျိုးကွဲ၊ သွေ့ခြောက်သောသို့မဟုတ်အမှုန့်ကလေးငယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်
လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ Gerber ဘွဲ့ရဟင်းသီးဟင်းရွက်အချဉ်ဓာတ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက် puffs, ဒါမှမဟုတ်လှည်းဘီး; Heinz ကလေးငယ်အစားအစာများ
X ရောင်းဝယ်ဖလှယ်ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလိမ်လည်မှုဟုသတ်မှတ်သည်။ ဤသည်ရပ်စဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် WIC အစီအစဉ်မှဖြစ်သည်။
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆိုစပါး (မုယော၊ oatmeal၊ ဆန်ဂျုံလုံး) သို့မဟုတ်ရောနှောထားသော / ပေါင်းမျိုးစုံ
၈ အောင်စသေတ္တာများသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာများ သာ
GMO သို့မဟုတ်မဟုတ် GMO
နို့၊ သစ်သီး၊ သစ်သီးဖျော်များ၊ သကြားသို့မဟုတ်အခြားသီးနှံမဟုတ်သောပါဝင်သည့်မွေးကင်းစကလေးငယ်များ (DHA, ARA သို့မဟုတ် probiotics)
ဖော်မြူလာအဖြစ် eWIC ကဒ်ပေါ်တွင်ထုတ်ပေး
ကလေးငယ်များသည်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းမှမွေးဖွားလာသည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံး ၆ လတာအတွက်သင်၏နို့ရည်သည်သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးဖြစ်သည်။
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆိုဟင်းရည်သို့မဟုတ်ဟင်းရည်ပါ ၀ င်သည့်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်မွေးကင်းစကလေးငယ်များအတွက်အသားသို့မဟုတ်ကြက်၊
မည်သည့်အဆင့်မဆို (ဆိုလိုသည်မှာ၊ အဆင့် ၁၊ အဆင့် ၂ စသည်)
2.5 အောင်စကွန်တိန်နာ သာ
အစားအစာပေါင်းစပ်ခြင်း (ဥပမာ၊ အသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ) သို့မဟုတ်ညစာစားပွဲများ (ဥပမာ၊ spaghetti နှင့် meatballs)
DHA သို့မဟုတ် ARA ပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုး
Gerber သည် Lil 'အစာ၊ Lil' ၏ဘေး၊ Lil 'Entrees သို့မဟုတ် Pasta Pick-ups - Beech Nut Tummy Trays သို့မဟုတ် Mini-Meals များဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ Heinz ကလေးငယ်အစားအစာများ; သဘာဝ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကလေးငယ်အစားအစာ
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆို 100% သဘာဝအချပ်, ဖျက်စီးသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့
8 အောင်စသို့မဟုတ် 16 အောင်စ packages များ
Mozzarella (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံး ၀)
အမေရိကန် (Pasteurized လုပ်ငန်းများ၌)
အဆီဓာတ်နည်းပါး; အဆီဓာတ်လျော့နည်းခြင်း၊ ဆီဥ၊ အဆီများ
ဗီတာမင် D ကိုခိုင်ခံ့စေ၏
တစ် ဦး ချင်းစီထုပ်, Cube, crumbles သို့မဟုတ် string ကိုဒိန်ခဲ
ဒိန်ခဲအစားအစာ၊ ဒိန်ခဲထုတ်ကုန်၊ တုပသောဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ခဲ၊
ငရုတ်ကောင်း၊ pimento၊ ပေါင်းထည့်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ နံ့သာမျိုးများ၊
DHA သို့မဟုတ် AHA (ဥပမာ Live Active စသည်ဖြင့်) ပါ ၀ င်သည့်ဒိန်ခဲ
အသင့်စားဆိုင် (သို့) တင်သွင်းသောဒိန်ခဲ၊ kosher ဒိန်ခဲ
တစ် ဦး ချင်းစီအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အရွယ်အစားသို့မဟုတ်ကျပန်းအလေးချိန် packages များအထုပ်
အော်ဂဲနစ်၊ Lactose- အခမဲ့ဒိန်ခဲ
အညိုရောင်၊ လှောင်အိမ်မဲ့၊ သဘာဝအသိုက်၊ မြေသြဇာကောင်းသောအကွာအဝေးသို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်ကျွေးသောကြက်ဥ၊ အမှုန့်သို့မဟုတ်အရည်ကြက်ဥအရောအနှော; ဥအစားထိုး; မာကျောပါတယ်
ပibိဇီဝဆေးအခမဲ့သို့မဟုတ်ကြီးထွားဟော်မုန်းကြက်ဥ၊ အော်ဂဲနစ်, ကိုလက်စထရောလျှော့ချ, ဒါမှမဟုတ်လျှော့ချပြည့်ဝဆီဥများ
ကလေးများအတွက် ၁၂-၂၃ လတစ်ခုတည်းအတွက်သာ
အဖြူ၊ ချောကလက်သို့မဟုတ် Lactose ကင်းသောနို့လုံး
တောင်းဆိုပါက - အောင်စ ၁၂ အောင်စသံဗူးများတွင် Vitamin D နှင့်ခိုင်ခံ့သောအငွေ့ပျံစေသောနို့ သာ
Soymilk: ၈th တိုက်ကြီးပုံမှန် Soymilk မူရင်း၊ ၈ ကြိမ်မြောက် Vanilla Soymilk၊ ပစိဖိတ် Ultra မူရင်း Soymilk နှင့်ပိုးမူရင်း Soymilk
အဆီလျှော့ချ (2%), စူပါ skim, ultra skim; ဗာဒံနို့၊ အုန်းနို့; ထိုကဲ့သို့သောထောပတ်အဖြစ်ယဉ်ကျေးနို့; ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းနို့၊ ဆိတ်နို့၊ ဆန်နို့၊ ထပ်တိုးပဲပုပ်ပရိုတင်း၊ အပင် sterols၊ DHA, ARA နှင့် / သို့မဟုတ် Omega3တို့ပါဝင်သောနို့။ tofu; အော်ဂဲနစ်နို့၊ အသီးအရသာနို့; အခြားနို့မဟုတ်သောသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းနို့
တစ် ဦး ချင်းအမှုဆောင်အရွယ်အစားအထုပ်များ၊ ဖန်ခွက်ကွန်တိန်နာ; ပိုင့်အရွယ်အစားကွန်တိန်နာ
25.6 အောင်စသေတ္တာအစားထိုးပိုကြီးတဲ့ box ထဲမှာထုပ်ပိုးတစ် ဦး ချင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အရွယ်အစား
ချိုသောနို့ဆီ; အငွေ့ပြန်ပြီးဖြည့်နို့; အဆီအခမဲ့နို့အငွေ့ပြန်
အလင်းသို့မဟုတ်အဆီလွတ်သုက်ပိုး၊ soymilk အနံ့ချောကလက်; ပိုးဗန်လီယို Soymilk,
အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက် ၂-၅ တစ်ခုတည်းအတွက်သာ
အဆီနည်း (၁%) သို့မဟုတ်အဆီမပါသော (Skim) နို့ဖြူ၊ ချောကလက်၊
တောင်းဆိုလျှင် - 25.6 အောင်စအတွက်အဆီခြောက်သွေ့သောနို့
အလင်းသို့မဟုတ်အဆီလွတ်သုက်ပိုး၊ soymilk အနံ့ချောကလက်; ပိုးဗင်နီလာ Soymilk, သို့မဟုတ်ပုံမရအခြားအရသာ; ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း - တည်ငြိမ် soymilk
အသစ် နို့မှုန့်လုံးဒိန်ခဲ 8 အောင်စ
အသစ် နို့မှုန့်လုံးတစ်ခုလုံး4အထုပ် - ၄ အောင်စကွန်တိန်နာ
နံနက်ခင်း Fresh Farms
စတော်ဘယ်ရီ - ငှက်ပျော
အနိမ့်အဆီ 32 အောင်စဒိန်ချဉ် Multipacks
အနိမ့်အဆီ 16 အောင်စဒိန်ချဉ် Multipacks
ယောဂ ၃၂ အောင်စကိုဘယ်လိုဝယ်ရမယ်
ဒိန်ချဉ်ရောနှော -in ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူရောင်းချခဲ့သည်
အတု၊ အနိမ့်ကယ်လိုရီသို့မဟုတ်မကယ်လိုရီအချိုဓာတ်ပါဝင်သောဒိန်ချဉ် (ဆိုလိုသည်မှာအလင်းနှင့် fit၊ carb master, ets ။ )
WIC ကိုလက်ခံသောကုန်စုံဆိုင်များသည်ဤလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသော WIC ခွင့်ပြုထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးကိုသိုလှောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
လတ်ဆတ်သောမြေတပြင်လုံး pre-cut သို့မဟုတ် pre- ကုန်တယ်အသီး
သတ္တု၊ စက္ကူ၊ ဖန်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဘူးများတွင်ဖျော်ရည်များဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသောစည်သွပ်ဘူးသို့မဟုတ်အေးခဲနေသောအသီးများကို
သစ်သီးဝလံများနှင့်သကြားဓာတ်၊ အနံ့၊ အဆီ၊ ဆီ၊
သကြား၊ ဆိုဒီယမ်၊ အနံ့အရသာ၊ အရသာ၊ အဆီသို့မဟုတ်ဆီပါသောသစ်သီးများ
အသင့်စားဆိုင် / အသုပ်ဘားမှအသီးများထည့်ခြင်းတောင်းများသို့မဟုတ်အသီးများ
gelatin သို့မဟုတ် jello အတွက်သစ်သီးများ; sorbet; သစ်သီးဖျော်စက်သို့မဟုတ်အသီးဘား
လတ်ဆတ်သောမြေတပြင်လုံး, pre- ဖြတ်သို့မဟုတ် pre- ကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဗန်းများသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသော ၀ န်ဆောင်မှုရွေးစရာများ၊ ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊
သတ္တု၊ စက္ကူ၊ ဖန်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဘူးများတွင်စည်သွပ်ဘူးသို့မဟုတ်ခဲနေသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
အဖြူ၊ အဝါရောင်၊ ခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်အာလူး
ထပ်ထည့်ထားသောသကြားများ၊ ဆိုဒီယမ်၊ အနံ့အရသာ၊ အနုဆေးရည်၊ တစ်သောင်း၊ အဆီနှင့်ဆီပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ချဉ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသို့မဟုတ်သံလွင်သီးများ (ဥပမာ - ချဉ်သီးများ၊ မြိန်မှု၊ အချိုမှုန့်စသည်)
condiments (ဆိုလိုသည်မှာ catsup၊ salsa, chutney, guacamole, pasta sauce, pizza sauce, spaghetti sauce စသည်)
ထိုကဲ့သို့သောကြိုးပေါ်တွင် chilies, gourds သို့မဟုတ်စားသုံးနိုင်သောပန်းပွင့်အဖြစ်တန်ဆာဆင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်
အသင့်စားဆိုင် / အသုပ်ဘားမှဟင်းသီးဟင်းရွက်တောင်းများသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် muffins သို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ
Creamed, sauced သို့မဟုတ်ပေါင်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ဥပမာ - ပြောင်းဖူးပုံစံပြောင်းဖူး)
အိမ်သုံး - အိမ်သိုမဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ပြုပြင်ထားသောအေးခဲနေသောအာလူးများ (ဥပမာ၊ ပြင်သစ်ကြော်၊ ထမင်းလုံးများ၊ နှစ်ခါဖုတ်ရသောအာလူး၊ hash browns)
ပိုတို၊ မြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ ရေတပ်၊ ကျောက်ကပ်စသည့်စည်သွပ်ဘူးများကိုပဲမျိုးစုံအကျိုးအမြတ်ဖြင့်ဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်
Pasteurized 100% မချိုသောသစ်သီးဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်
ဘူးများ, ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာသို့မဟုတ်ပုံး သာ
သကြားသို့မဟုတ်သကြားအစားထိုးထည့်သွင်းထားသောဖျော်ရည်၊ သစ်သီးနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များရောစပ်ခြင်း၊ အရည်ရွှမ်းဖျော်ရည်၊ စပျစ်သီးဖျော်ရည်၊ ဖျော်ရည်အချိုရည်သို့မဟုတ်ကော့တေး; ကာဗွန်နိတ်နှင့်ဖျော်ရည်; အားကစားအချိုရည်; Cider; သံပုရာသို့မဟုတ်ထုံးဖျော်ရည်; အော်ဂဲနစ်ဖျော်ရည်၊ လတ်ဆတ်သောဖျော်ရည်၊ မွေးကင်းစကလေးဖျော်ရည်၊ V-8 Splash သို့မဟုတ် Fusion မျိုးကွဲ
ဖန်ပုလင်း၊ တစ် ဦး ချင်းစီဝတ်ပြုအရွယ်အစား၏ packages များ
အေးခဲအာရုံစူးစိုက် 12 အောင်
သဗျစ်သီး: အဖြူ၊ ခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်၊ နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲကယ်လစီယမ်
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတည်ငြိမ်အာရုံစူးစိုက် 11.5 အောင်
စင်ပေါ် Stable သို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာ
64 OZ ။ = 1/2 ဂါလံ
128 အောင်စ။ = 1 ဂါလံ
စပျစ်သီး: အဖြူ၊ ခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်; နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲကယ်လစီယမ်
ခရမ်းချဉ်သီး: regular သို့မဟုတ်အနိမ့်ဆိုဒီယမ်
Kroger - မူရင်းသို့မဟုတ်စပ်
၁၂ မှ ၃၆ အောင်စသေတ္တာများ (သို့) အိတ်များထဲမှ Cold Cereal
လူပျိုသေတ္တာဘူးများသို့မဟုတ် packet ကို မှတပါး Quaker လက်ငင်း Oatmeal
WIC ကိုလက်ခံသောကုန်စုံဆိုင်များသည်ဤလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသော WIC ခွင့်ပြုထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးကိုသိုလှောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော WIC အစားအစာအမျိုးအစားများကိုသယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
16, 20 သို့မဟုတ် 24 အောင်စ packages များ
16 သို့မဟုတ် 20 အောင်စ
16 သို့မဟုတ် 24 အောင်စ
12 မှ 16 အောင်စအထုပ်
16 အောင်စ packages များ သာ
အော်ဂဲနစ်၊ အအေးခံသိုမဟုတ်အေးခဲနေသော tortillas
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆိုဆန်၊ ဆီ၊ ဆီနှင့်ဆားမပါသောအညိုရောင်ဆန်
14 မှ 32 အောင်စ packages များ
အော်ဂဲနစ်၊ ဘာစမာတီ၊ ရိုင်း၊ ဝဟီနီ၊ အဖြူနှင့်စံပယ်ဆန်
Oats သို့မဟုတ် granola
ထပ်ထည့်ထားသောသကြား၊ အဆီ၊ ဆီနှင့်ဆားမပါဘဲ
Barilla - ဂျုံလုံး
Hodgson စက် - ဂျုံလုံး
Barilla - အစေ့လုံး
Eရာမလင်းယုန် - ၁၀၀% လုံးဂျုံ
ဂရိတ်တန်ဖိုး - ဂျုံလုံး
Ronzoni သီးနှံရိတ်သိမ်းမှု - အစေ့လုံး
နေ့စဉ်လိုအပ်သော - ဂျုံတစ်ခုလုံး
Kroger - ၁၀၀% လုံးနှံ
စားနပ်ရိက္ခာကလပ် - ဂျုံလုံး
Weis - ဂျုံလုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစု - ဂျုံလုံး
'Hodgson Mill - ဂျုံလုံး
လုံးပေါင်း ၃၂ အောင်စကိုဝယ်ယူရန်ဥပမာအချို့
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပဲမျိုးစုံကိုမဆိုပေါင်းစပ်အပါအဝင်မည်သည့်မျိုးစုံဖြင့်ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပဲစေ့များကိုခြောက်သွေ့စေသည်
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆိုသကြား၊ အဆီ၊ အဆီများနှင့်အသားများမပါသောအဆီလွတ် refried ပဲအမျိုးမျိုးအပါအ ၀ င်မည်သည့်စည်သွပ်ဘူးအမျိုးအစားမဆိုရှိသည်။ ဆိုဒီယမ်နိမ့်ကျနိုင်ပါသည်
eWIC Benefit Balance တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပဲခြောက်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
ပေါင်း ၄ ခု (၄) ၁၅ မှ ၁၆ အောင်စဘူး (၆၄ အောင်စစုစုပေါင်း) ထက်မပိုရန်ပေါင်းစပ်ခြင်း
ထပ်မံအရသာရှိသောအထုပ်များပါ ၀ င်သောပဲမျိုးစုံသို့မဟုတ်စည်သွပ်ဘူးများ၊ နောက်ထပ်အရသာများ၊ သကြားများ၊ အဆီများ၊ ဆိုးဆေးများ၊ ဆီများနှင့်အသားများ
ပဲသေတ္တာများ၊ အမြောက်အများသို့မဟုတ်လျော့ရဲရဲပဲ; ကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ်လှော်အခွံမာသီး
အစိမ်းရောင်ပဲများ၊ ပဲစေ့များ၊ လိမ္မော်ရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ ဖယောင်းနှင့် edamame ပုံစံပဲပုပ်များကဲ့သို့သောမျိုးကွဲများသည်ငွေသားအကျိုးအမြတ်သာဖြင့်ဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။
အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် ၀ ယ်ရန်မရရှိနိုင်ပါ
စီးပွားဖြစ်ပြင်ဆင်ထားပြီးကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသောအမျိုးမျိုးသောသကြား၊ အနိမ့်ဆိုဒီယမ်သို့မဟုတ်ဆိုဒီယမ်အနိမ့်မြေပဲထောပတ်၊ ချောမွေ့သော၊
တစ်ခုတည်းသော 16-18 အောင်စအထုပ်။
နှင်တံမြေပဲထောပတ်; ဂျယ်လီ၊ ပျားရည်၊ ချောကလက်၊ marshmallow သို့မဟုတ်အရသာရှိသူများအပါအဝင်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အခြားအခွံမာသီး (ဥပမာ - ဗာဒံ၊ ပဲ၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ သီဟို,်၊ သစ်ခွံစသည်)
အဆီနည်းသော၊ အဆီလွတ်၊ ကာဗွန်နိမ့် (သို့) မြေပဲပြန့်ပွားသည်
ဗီတာမင်အီး၊ DHA သို့မဟုတ် ARA စသည့်အာဟာရများပါသည့်မြေပဲထောပတ်
တစ် ဦး ချင်းစားသုံးရန်အရွယ်အစားအထုပ်များ၊ ပြွန်များ၊ ချပ်များသို့မဟုတ်“ To Go” ကွန်တိန်နာများ
X အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအတွက်မြေပဲထောပတ်သည်မွန်းကျပ်မှုအန္တရာယ်ကိုမခံပါ။
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Chunk light tuna၊ ပန်းရောင်ဆော်လမွန်
5 အောင်စ,6အောင်စသို့မဟုတ် 14.75 အောင်စဘူး
Sardines သို့မဟုတ်ဂျက် Mackerel; Albacore၊ အဝါရောင် Fin၊ Chunk White၊ Solid White၊ Tongol သို့မဟုတ်အခြားအထူးတူနာငါးများ၊ Blueback, Chum, Sockeye, Red, King, Wild သို့မဟုတ် Coho salmon
အလွှာသို့မဟုတ်ပြီးလျှင်; ဆိုဒီယမ်နိမ့်; select လုပ်ထားသောဖန်စီနှင့် / သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲ
ဆား၊ ရေနံနှင့်ရေတို့ မှလွဲ၍ အခြားအရသာများ၊
အစားကောင်းကြိုက်သူများ, အသား, လတ်ဆတ်သောအခြောက်, အေးခဲသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ငါး
အိတ်ဆောင်သို့မဟုတ်သတ္တုပါး packets တွေကို
တစ် ဦး ချင်းစီစားသုံးမှုအရွယ်အစား၏အထုပ်
ငါးနှင့် cracker ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်ငါးပြန့်ပွား
ငါးအောင်စကိုဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ
ရုံ 304-558-0030 ကိုခေါ်ပါ
သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသခံ WIC ဆေးခန်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ
ဖက်ဒရယ်လူထုအခြေပြုဥပဒေနှင့်အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန (USDA) ၏အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်မူဝါဒများနှင့်အညီ USDA နှင့်၎င်း၏အရသိရသည်
USDA အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သောသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲသောအေဂျင်စီများ၊ ရုံးများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမှတားမြစ်သည်
လူမျိုး၊ အရောင်၊ နိုင်ငံသား၊ လိင်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ အသက်၊
မသန်စွမ်းသူများအတွက်အစီအစဉ်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများလိုအပ်သည် (ဥပမာ - မျက်မမြင်စာ၊ ပုံနှိပ်စာလုံးကြီး၊
အမေရိကန်လက်သင်္ကေတပြစသည်တို့သည်အကျိုးခံစားခွင့်လျှောက်ထားသည့်အေဂျင်စီ (ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသ) ကိုဆက်သွယ်သင့်သည်။ နားမကြားသူများ
နားကြားရခြင်း (သို့) မိန့်ခွန်းမသန်စွမ်းမှုများသည် USDA ကို Federal Relay Service (800) 877-8339 မှဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်
ပရိုဂရမ်အချက်အလက်များကိုအင်္ဂလိပ် မှလွဲ၍ အခြားဘာသာစကားများဖြင့်လည်းရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်ဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်ကိုတင်ပြရန်အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ရသော USDA အစီအစဉ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတိုင်ကြားချက်ပုံစံ (AD-3027) ကိုဖြည့်ပါ
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html နှင့် USDA ရုံးများတွင်သို့မဟုတ် USDA သို့လိပ်မူသည့်စာတစ်စောင်ရေးပြီးပေးပါ
အက္ခရာထဲမှာပုံစံအတွက်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံး။ တိုင်ကြားချက်ပုံစံမိတ္တူတောင်းရန် (၈၆၆) ၆၃၂-၉၉၉ သို့ခေါ်ဆိုပါ။ သင့်ရဲ့တင်သွင်းပါ
ဖြည့်ထားသောပုံစံသို့မဟုတ် USDA သို့ USDA သို့စာ:
၁။ မေးလ် - အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
2. ဖက်စ်: (202) 690-7442; ဒါမှမဟုတ်
3. အီးမေးလ်: program.intake@usda.gov ။